AUKEY LS02 smartwatch nyochaa na chaja Aircore 15W | Akụrụngwa Akụkọ
Rafa Rodríguez Ballesteros | 14/07/2021 18:00 | Nyocha
Taa, anyị na-agwa gị okwu na Androidsis banyere ngwaahịa abụọ dị iche iche mana ha nwere ihe jikọrọ. Ha sitere na otu onye nrụpụta, AUKEY, na onye ọ bụla na mpaghara ha na-anwa ịnye otu, ngwaahịa nke ezigbo arụmọrụ na ọnụ ọnụ ọnụ. AUKEY ezuola oke amaara na mpaghara teknụzụ maka inye nnukwu nso nke ngwa na ngwaahịa maka smartphone.
Oge a anyị lekwasịrị anya abụọ n'ime ha. Anyị enweela ike ịnwale smartwatch AUKEY LS02 na chaja ikuku Ihe nkiri 15W. Ngwaahịa abụọ rutere n'ahịa ka ha bụrụ otu ọzọ ọzọ na enweghị njedebe nke ohere anyị na-ahụ n'ahịa.
1 AUKEY na ngwaahịa ya ruru ọrụ ahụ
2 Ihe ngosi LS02
2.1 LS02 smartwatch imewe
3 AUKEY LS02 Atụmatụ
4 AUKEY Aircore 15W Ikuku chaja
AUKEY na ngwaahịa ya ruru ọrụ ahụ
KElọ ọrụ AUKEY na-agba mbọ imezu ihe ha niile na-enye ngwaahịa dị mma na ọnụahịa dị mma. Anyị enweela obi ụtọ iji nwalee ọtụtụ ngwaahịa sitere na onye nrụpụta a, na n'ozuzu anyị hụrụ ezi risịrị na larịị atụmatụ. Taa, anyị ga-ekwu maka ya ngwaahịa abụọ na-ekerịta nkà ihe ọmụma a.
Mgbe anyị kpebiri na smartwatch anyị na-eburu n'uche ọtụtụ akụkụ. Pricegwọ, uru ihe ọ na-enye na ihe imewe na-arịọ anyị. Anyị nwere ike itinye ọnọdụ ndị a n'uche maka ịzụta ọ bụla. Ọ bụ ya mere taa anyị na-ele anya na smartwatch AUKEY LS02 na chaja ikuku Ihe nkiri 15W.
Ihe ngosi LS02
Anyị na-eche ihu a smartwatch nlereanya dị ka ọtọ dị ka ọ bụ uche. Ngwaọrụ na adịghị adọta uche site na imepụta ya maka ịmụrụ anya. Ọ nwere ike na-adịghị hụrụ na gị nkwojiaka. Ma ọ na-enye anyị nnukwu arụmọrụ na arụmọrụ iji kwekọọ nke ọtụtụ ụdị ndị ọzọ dị oke ọnụ ahịa.
LS02 smartwatch imewe
Dị ka anyị na-agwa gị, ndị AUKEY LS02 Ọ bụ elekere maka ndị na-achọghị ịdọrọ uche. Na nha "nkịtị", ọ naghị enwe nsogbu n'ụdị ma ọ bụ na agba, mana nke a adịghị emegide ya ebughibu ma mara imewe. A smartwatch na acdara hasis dara na akụkụ anọ udi na isi awọ ọchịchịrị nke gị dabara 1'4 inch ihuenyo.
N'ime ya Aka nri achọta ya naanị ya bọtịnụ nkịtị nwere ọtụtụ ọrụ maka ọrụ ya dị ka ụlọ, ma ọ bụ gbanyụọ / gbanyụọ.
Na azụ anyị hụrụ nyochaa obi ike nke na-aga n'ihu nha mgbe anyị nwere ya na nkwojiaka. Ọsọ ọsọ na ntụkwasị obi, dịka anyị nweela ike iji ngwaọrụ ndị ọzọ tụnyere. Ihe bara uru karia mgbe a na-eme egwuregwu. Nakwa na azụ ya anyị ga-ahụ Magnetik atụdo maka batrị odori.
Jide ya UKEY LS02 na ukara website na a 10% ego
Belt ahụ bụ ihe ọzọ nke isi ihe o kwuru. Nke obosara dịka nha ihuenyo, na matte ojii. Ma iji mmetụ nke dị mma na mma nke ọma karịa nkezi ọ bụrụ na anyị atụnyere ụdị ndị ọzọ anyị nwere ike ịnwale.
AUKEY LS02 Atụmatụ
Oge eruola ilele ihe niile ihe AUKEY LS02 nwere ike inye anyị. Anyị kwesịrị iburu n’uche na anyị na-eche ihu ngwaọrụ nke anyị nwere ike ịtụle echekwa ọ bụrụ na anyị atụnyere ụdị ndị ọzọ. Mana nke a bụ ihe na - arụ ọrụ maka enyemaka nke LS02 nyere uru ọ nwere.
Malite na ihuenyo gị, a TFT panel nke nwere diagonal nke 1,4 sentimita asatọ na 320 x 320 dpi mkpebi, karịa ihe zuru oke maka nha a. Na-ele anya nke ukwuu ọbụlagodi na ọnọdụ anwụ. Ọzọkwa nwere nchapụta ọkwa nchapụta na anyị nwere ike họrọ na- 4 ụdị nke ihie. Ihe na-efu na ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ.
Oge bụ otu n'ime ike nke AUKEY LS02. Ọ ga-abụ tinyere ebube na gị ama, na a gaghị enwe ọkwa ọ bụla i nwere ike ida. Nwere ike hazi smart ificationsma Ọkwa oku, na-agụ ozi na ihuenyo na ọbụna rụọ ọrụ ozi sitere na netwọkụ mmekọrịta kachasị amasị gị.
Un ezigbo enyi iji mee egwuregwu kachasị amasị gị na-ejikwa egwu egwu site na nkwojiaka gị. Otu n'ime nkọwa dị mkpa bụ na AUKEY LS02 n'ezie dịrị obere, ị gaghị achọpụta na ị na-eyi ya. Anyị na-achọta ruo 12 egwuregwu modalities na ị nwere ike inyocha na-ebu ihe ijikwa calorie gị ma ọ bụ kilomita dị elu. Setịpụ ihe mgbaru ọsọ na ọganihu ma nweta ihe ịma aka.
Yougaghị echegbu onwe gị maka ọsụsọ ma ọ bụ splas mmiri ga-emebi elekere gị. Atụmatụ AUKEY LS02 Asambodo IP68 iguzogide aja na mmiri. Na-eguzogide okpomọkụ n'etiti -20º na 45º. Zụta AUKEY smartwatch ugbu a LS02 na mbelata na weebụsaịtị ya.
Na otu n’ime akụkụ ndị ọrụ jiri kpọrọ ihe nke ukwuu, ndụ batrị, ọ na-adịkwa elu. AUKEY LS02 na-enye a ikike nke ihe ruru ụbọchị iri abụọ. Will ga-echezọ kpamkpam ebe ị hapụrụ chaja smartwatch. Obi abụọ adịghị ya, maka ọtụtụ ebumnuche, AUKEY LS02 bụ smartwatch iji banye na akaụntụ.
AUKEY Aircore 15W Ikuku chaja
Dị ka anyị kwuru na mbido akwụkwọ a, AUKEY bụ onye amaara mba ụwa maka ọnụọgụ nke ngwa ọ na-arụ maka ngwaọrụ anyị. Anyị nwere ike ikwu nke ahụ odori ngwa so n'etiti ndị kasị arụpụtara ma rekwaa ụwa niile. Na nke a anyị na-ahụ chaja magnetik chaja bara uru dị ka ọ mara.
Anyị nwere ike ịgwa gị obere banyere imewe chaja. N'okwu a, ọ bụ a dịtụ pụrụ iche wireless chaja maka usoro ya na maka ọtụtụ ihe ọ na-enye. O nwere udi okirikiri ma nwekwaa oke nke pere mpe na okpukpo. Ọ nwere ike ịbụ chaja anyị na-emebu "iburu". Ọsọ, nkasi obi iji na ọnụ ala, n'ezie ihe na-akpali nhọrọ. Zụta ya ugbu a na weebụsaịtị AUKEY ọnụahịa kacha mma.
AUKEY wetara anyi echiche ohuru nke chaja ikuku magnetized. Aircore 15W bụ doro anya site na chaja ọhụrụ e mere Apple maka iPhone 12, akpọ MagSafe. Ọbụghị naanị na anyị nwere ike ịgba ụgwọ ekwentị anyị dakọtara na ikuku na-akwụ ụgwọ ya. Ọzọkwa Anyị nwere ike iji ya mgbe batrị na-akwụ ụgwọ site na ijide ya n'etiti aka anyị na-enweghị chaja ịkwụsị.
Aka na Qi wireless ngwa ngwa ịgba akwụkwọ asambodo ruo 15W. Anyị nwere ike ịgba ụgwọ ọ bụla dakọtara na ngwaọrụ dị ka smartphones, ekweisi ma ọ bụ smartwatches. E wezụga nke ahụ 1,2 mita ogologo, USB Type-C format cable, na-eme ka ojiji ya ghara iru ala mgbe anyị nwere ya plugged n'ime ike ma ọ bụ ụfọdụ ọdụ ụgbọ mmiri nke kọmputa anyị.
Ọ bụrụ n’ikpebie ịzụta chaja ikuku, nweta AUKEY Aircore 15W Ebe a na ebe nrụọrụ weebụ gị ma nwee obi ụtọ iji ya.
Igwe chaja Aircore 15W gosipụtara potente magnetik mpaghara nke ga-ejide ngwaọrụ ahụ n'enweghị ịhapụ ya ọbụlagodi na anyị na-ebugharị ya ma ọ bụ jide ya n’aka anyị. Otu ihe dị mkpa mmalite sitere na chaja ikuku mbụ ndị, dịka anyị kwuru, anyị ga-ahapụ ekwentị anyị na-enweghị ike iji ha.
Ihe dị mkpa iburu n'uche bụ nke ahụ anyị enweghị ike ịchọta nkwụnye ọkụ na igbe chaja. Anyị ga-amarakwa nke ahụ nke mere na Aircore na-arụ ọrụ zuru oke ma rute ọsọ ọsọ ya kachasị elu, 15W anyị ga-achọ nkwụnye ntanetị n'etiti 18W ma ọ bụ 20W.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Nnyocha nke AUKEY LS02 smartwatch na chaja Aircore 15W